Concertina razor Wire dia karazana tariby madiodio na taratra hareza izay miforona ao anaty coil lehibe izay azo itarina toy ny concertina. Miaraka amin'ny tariby tsotra (sy / na taratra / kasety) sy pika vy, matetika izy io no ampiasaina hananganana vato misakana amin'ny tariby toy ny rehefa ampiasaina amin'ny sakana any am-ponja, toby fitanana na fanaraha-maso korontana.
2.5 mm lehibe tariby indroa strand 4 teboka mafana naroboka nandrisika Barbed Wire ho an'ny fefy
Tady tariby dia vita amin'ny tariby vy ambany kalitao avo lenta ary voahodina amin'ny masinina tariby mandeha ho azy tanteraka.
Ny tariby misy barbed dia manolotra famokarana lehibe manohitra ny harafesina sy ny fitrandrahana ateraky ny atmosfera.
Ny fanoherana avo lenta dia mamela elanelana lehibe kokoa eo anelanelan'ny tsangantsangana.